Ciidamada AMISOM Oo Gawaari Dagaal kala wareegay Xarkada Al-Shabaab – STAR FM SOMALIA
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, ayaa sheegaya in ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa Itoobiya Magaaladaasi Baydhabo ay geeyeen gaadiid dagaal oo ciidamada Shabaab ay ka qabsadeen.
Gaadiidkaan dagaalka ah oo labo baabuur ah ayaa la sheegay in ciidamada Amisom ay ku qabsadeen, duqeyn ay ku garaaceen deegaanka Dalandoole oo hoostagga Magaalada Buurhakaba ee Gobolka Baay.
Wariye ku sugan Magaalada Baydhabo ayaa soo sheegaya in ciidamada Amisom, labadaan baabuur ay kasoo galiyeen dhanka wadada aada Magaalada Muqdisho ee Baydhabo ka baxda, waxaana lasoo dhexmarsiiyay Baabuurta Bartamaha Magaalada Baydhabo.
Ciidamada Amisom ayaa daawadsiiyay shacabka Magaalada Baydhabo, labadaasi baabuur ee la sheegay inay kasoo qabsadeen ciidamada Shabaab, waxaana Saraakiisha Amisom ay u sheegeen dadka in maanta gelinka dambe lasoo bandhigi doono.
Labadaan baabuur oo nooca dagaalka ah ayaa ciidamada Amisom waxa ay ku qabsadeen markii Shabaab ay ku duqeeyeen deegaanka Dalandoole, kadibna Shabaab ay halkaasi isaga carareen, sidaasina ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda ay ku tageen oo gaadiidkaan ay ku soo qabsadeen.
Ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah howlgalka Amisom, ayaa muddooyinkaan dambe bilaabay inay adeegsadaan diyaarado ay ku duqeeyaan deeganada Shabaabka ay ku sugan yihiin ee Koonfurta Somalia.
Duqeyntii ka dhacday Dalandoole, Bishii aan soo dhaafnay dhamaadkeeda ayaa waxaa ku geeriyooday dad shacab ah, kadib markii duqeynta ay ku dhacday gaadiid ay saarnaayeen shacab taagnaa, koontarool Shabaabka ay gaadiidka ku baaraan deegaankaasi.